सिमानामा तार लगाउ, निजि अस्पताल राष्ट्रियकरण गर : नेता गुरुङ – Khabarhouse
सिमानामा तार लगाउ, निजि अस्पताल राष्ट्रियकरण गर : नेता गुरुङ
Khabar house | २४ बैशाख २०७७, बुधबार ०२:२० | Comments
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले को;रोना भाइ’रसको महामारीका बेला सरकारको ध्यान अन्तै मोडिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘महा मारी वि’रुद्ध लड्नुपर्ने बेला सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्यायो । जुन को;रोनासँग सम्बन्धित थिएनन्’ गुरुङले मंगलबार संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रश्न गरे, ‘सरकारको ध्यान कता छ ?’ अध्यादेश फिर्ता भए पनि त्यो महामारीबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ आए को गुरुङले दावी गरे ।
१. परीक्षण बढाऊ : सांसद गुरुङले देशमा को;रोना संक्रमण परीक्षणको गति धेरै सुस्त देखिएको बताए। परीक्षणका लागि किट र अन्य उपकरणको अभाव हुन नदिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे। स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा प्रश्न उठ्ने वाता वरण नबनाउन आग्रह गरे । ‘खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो भनेर अहिले अन्यत्र सुम्पने कार्य भएको छ’ उनले भने, ‘प्रश्न उठ्यो भनेर सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।’
२. निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर : गुरुङले को;रोना विरु’द्धको लडाईंमा साथ नदिएको भन्दै निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् । ‘क्षमताले भ्याएसम्म अस्पतालले सबै प्रकारका रोगको उपचार सेवा दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो बेला त्यस्तो देखिएन, त्यसकारण निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । को;रोनाले यही सन्देश दिएको छ ।’
४. सीमामा तारबन्दी गर : खुला सीमानाका कारण भारतबाट को;रोना भाइरस भित्रन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै गुरुङले सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने बताए । खुला सीमा भएका कारण जति कडाइ गरे पनि मानवीय आवतजावत नरोकिएको उनको भनाइ छ । ‘खुला सीमा टाइट गर्नुपर्छ । सीमामा तारबन्दी गर्नुपर्छ । को;रोनाले सीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ’ गुरुङले समिति बैठकमा भने । उनले सिमानामा सशस्त्र प्रहरी नभई नेपाली सेना खटाउन पनि माग गरे । ‘सीमामा खटाउनुपर्ने सेना हो । तर, सेनालाई अर्कै काम दिएर सशस्त्रलाई पठाएको छ । यो उल्टो भयो’ गुरुङको टिप्पणी छ ।